Yintoni iNgelosi yam enguMgcini ngoMhla wokuzalwa: uMkhuseli wakho!
kuqala » I-Numerology » Ngubani iNgelosi yam enguMgcini: Uwazi njani ngomhla wokuzalwa
Ngubani iNgelosi yam enguMgcini: Uwazi njani ngomhla wokuzalwa
Fumanisa ithini ingelosi yam yomgcini ngomhla wokuzalwa? Kuyinto eqhelekileyo ukufuna ukwazi oku, ekubeni sonke sifuna ukwazi igama lengelosi yethu ekhuselayo.
Kwiminyaka embalwa edlulileyo bekunzima kakhulu ukukutyhila oku, kodwa kule mihla kukho iitafile ezenziwe eziphendula yonke le mibuzo.
Ngokubanzi, konke okuya kufuneka ukwazi ngumhla, inyanga kunye nonyaka owazalwa ngawo. Usuku ngalunye lunegama leNgelosi elibonakalisiweyo eliya kuhluka kwinyanga nenyanga. Ke, ukwazi itafile ngoku, yijonge kwangoko.
Ngubani iNgelosi yam enguMlondolozi ngomhla wokuzalwa?
Okumangalisayo kukuba, kulula kakhulu ukujonga ukuba yeyiphi iNgelosi ngokomhla nenyanga eyazalwa ngayo. Kule meko, awuyi kufuna unyaka wakho wokuzalwa.
Jonga nje i-infographic engezantsi! Khangela nje ngosuku nenyanga. Khawucinge ukuba wazalwa nge-3 kaDisemba, khangela enye ene-03/12, kule meko ihambelana: Ndiyabulela.
Iikholomu zihamba phambili ngenyanga yokuzalwa. Kowokuqala sinoJanuwari, Februwari kunye nentwana kaMatshi, okwesibini sinoMatshi, uAprili noMeyi njalo njalo.
Infographic: Usuku lweNgelosi enguMgcini
Yintoni iNgelosi enguMlondolozi?
Okokuqala, ngaba uyazi ukuba yintoni iNgelosi enguMgcini? Ngokubanzi, liqumrhu elilungileyo elisoloko lisecaleni kwethu lisinceda kwezona zihlandlo zinzima zobomi bethu.
Kukho abo bakukholelwayo oko ngamalungu entsapho angasekhoyo ababephethe ukunyamekela abantu emhlabeni. Lo mntu udla ngokuba ngutata, umama okanye elinye ilungu losapho elalisondele kakhulu kuthi ngexa esaphila.
Indima yeli lungu losapho kukusikhathalela nokusithuthuzela kwezona zihlandlo zinzima. Nangona kunjalo, le ngelosi isaya kusihlangula kwiindlela ezimbi, iinkampani ezimbi kunye nezigqibo ezimbi.
Ukuba sithatha isigqibo sokulandela iindlela ezimbi, indima yeNgelosi kuzama ukusinceda ukuba siphume kubo ngokukhawuleza. Yinto, ngaphandle kwamathandabuzo, iqumrhu lokulungileyo ekufuneka silihloniphe.
Yintoni ukubaluleka kokwazi umhla weNgelosi enguMgcini?
Ngokuchaseneyo nendlela abaninzi abacinga ngayo, kubaluleke kakhulu ukujonga ukuba ngubani ingelosi yakho ekhuselayo kulo lonke usuku lwakho. Oku sikutsho ukuze nithandaze kuye ngokuthe ngqo.
Unokwenza umthandazo oqinileyo ngenxa yakhe ukuze cela ubukho bakho ebomini bakho kunye noncedo lwabo ngamaxesha obunzima obukhulu. Kukho kakhulu imithandazo yaloo njongo.
Ukongeza, kusoloko kubalulekile ukwazi ukuba ngubani osikhuselayo kwaye ngubani osecaleni kwethu ngamaxesha okubandezeleka okukhulu.
Ngokungathi oko akwanelanga, xa ulazi igama lakhe, unokusuka nje ukhangele ukuba unjani, into ayithandayo kunye nobuntu bakhe.
Ngaba ingelosi yam enguMkhuseli yingelosi yam ekhuselayo?
Ewe. Ingelosi yakho ngumkhuseli wakho wobuthixo. Uhlala ehamba ecaleni kwakho, elandela inyathelo lakho kunye nesigqibo ngasinye.
Akanakukukhethela iindlela ezilungileyo, kodwa unokukunceda ngokubonisa imiphumo eya kuba nayo le ndlela.
Ke, unokuqiniseka ukuba le ngelosi ngoyena mkhuseli wakho mkhulu emhlabeni.
Ndithetha njani njengeNgelosi yam enguMgcini?
Ngoku uyazi ukuba ungalifumana njani igama le-Angel yakho enguMlondolozi ngomhla wakhe wokuzalwa, unokuthetha ngokuthe ngqo naye.
Enye yeendlela ezilungileyo zokuyenza uthandaza umthandazo onamandla. Uthandaza kuye, uthethe igama lakhe kwaye ubuze into oyifunayo.
Unokukhanyisa ikhandlela elimhlophe kwaye ulibeke ecaleni kweglasi yamanzi, oku kuya kunika amandla kunye namandla kumkhuseli wakho kunye nawe.
Abantu abaninzi bayasibuza ukuba singayibona njani iNgelosi yam yoMlondolozi kakuhle oku akunakwenzeka. Asikwazi ukumbona, ekubeni engumntu ongokobuthixo, kodwa sinokubuva ubukho bakhe ebomini bethu.
bona njani Fumana iqabane lakho lomphefumlo ngokuzalwa kwakho
yazi i intsingiselo yokubona ixesha elichanekileyo ewotshini
Ndikholelwe, akukho nzima ukufunda indlela yokufumana iNgelosi yam yoMlondolozi, nokuba kungomhla wokuzalwa okanye enye indlela ebonelelwa yi-numerology.
Ukuba uyaqhubeka unemibuzo, siyakucela ukuba ushiye nje uluvo kweli nqaku.
1 Ngubani iNgelosi yam enguMlondolozi ngomhla wokuzalwa?
2 Yintoni iNgelosi enguMlondolozi?
2.1 Yintoni ukubaluleka kokwazi umhla weNgelosi enguMgcini?
2.2 Ngaba ingelosi yam enguMkhuseli yingelosi yam ekhuselayo?
2.3 Ndithetha njani njengeNgelosi yam enguMgcini?